Ndeapi maTekinoroji ari C-Chikamu Vatengesi Vanoisa In In? | Martech Zone
Ndeapi maTekinoroji ari C-Chikamu Vatengesi Vanoisa In In?
Chipiri, Kurume 22, 2016 Douglas Karr
Nhema Ink yakaita a C-chikamu 2016 Kushambadzira Kudzidza, Kuongorora vashambadziri kubva kumakambani epamusoro e2000 muUnited States nemari inonongedzerwa pagore nebhajeti rekushambadzira rakabatana remadhora mabhiriyoni mashanu emadhora mumabasa nemubhadharo.
Dhawunirodha Black Ink's C-chikamu 2016 Kushambadzira Ongororo
Dzidziso Dzakakosha kubva kuChitema Ink Yekudzidza
Zvinokosheswa nevashambadzi ndezvekufambisira mberi kufambidzana kwechiratidzo uye vatengi-centricity izvo zvinoda kuvandudzwa kunoshamisa kweKushambadzira Technology zvivakwa uye omni-chiteshi kugona.
Kuwana enderera analytics kuita sarudzo dzakangwara”Ndiyo chete chipingaidzo chikuru chekubudirira mubhodhi.
Inter- / Intra-department hukama hwekuvaka hwakakosha mukubudirira mune ramangwana, kunyangwe zvichinyanyo kufuratirwa sechinhu chakakosha muna 2016.
Muzhinji, vashambadziri vangatore mari-zhinji mukuchengetwa kwevatengi uye kusimudzira kuedza, pane kutenga kwevatengi.
Vashambadziri vane chivimbo chekutaura nezvetekisheni yemushandirapamwe kubudirira asi vanonetseka kuendesa zvekushambadzira zvemari zvemari zvinoda kuC-suite uye yepamusoro manejimendi.
Iwo epamusoro matatu mapoka eMartech angangotengwa muna3 ari Bhizinesi Njere, Marketing Automation, uye Kubatana kweVatengi software mhinduro.
Zvinonakidza kwandiri kuti vashambadziri vauya pakuziva kuti zvese zvinoitika zvevatengi zviri kukanganisa kuchengetedza, asi ivo havasi kushanda kudzikisira musiyano nemamwe madhipatimendi. Ini handina chokwadi chekuti unovandudza sei yako yekuwana uye yekuchengetedza mabasa pasina kunyatso kushanda nekutengesa kwako, chigadzirwa, sevhisi, uye manejimendi madhipatimendi mune zuva uye zera uko mukurumbira wako uri pachena uye unowanikwa pamhepo kune wese munhu. zvipingamupinyi zvekubudirira mune zvishandiso, zviwanikwa, uye hutungamiriri zvakatsanangurwa mumhedzisiro… asi unozvivandudza sei izvo usingataure zita uye kuona kubudirira kwaro munzvimbo dzevatariri?
Kubva pane chinongedzo, Kushambadzira Tekinoroji iunganidzwa yakaputsika yezviuru zvemhinduro. Vatambi vakuru vakaita seSalesforce, Microsoft, Oracle, SAP, uye Adobe vanoramba vachitenga mapuratifomu madiki anogadzirisa niche nyaya - asi hapana mubvunzo kuti iyi indasitiri yakaoma nematoni ezvekushandisa uye inopindirana. Ini ndinonzwa kuti hapana kuwanda kuzhinji mukushambadzira masheya pakati pemakambani aya kunze kweavo vatambi vakuru.
Nhema Ink ROI's C-level 2016 Yekushambadzira Yekudzidza inosimbisa mamwe eakajairika, akapararira-ekushambadzira mafambiro anokanganisa makambani epasirese, asi zvakare mamwe akasarudzika masiyano pakati pekambani tsika, zvido zvebhajeti, matambudziko, nemikana.
Isu tinoshanda nemamwe makambani akakurisa pamwe nekutangisa kudiki uye ini handina chokwadi chekuti maonero acho akasiyana zvakanyanya pakati pavo. Kunze kwebhajeti uye zviwanikwa, mabhizimusi madiki nepakati nepakati achiri kutsvaga kuzivisa zvirinani, otomatiki kuwedzera zviwanikwa, uye zvirongwa zvekuwedzera ruzivo rwevatengi. Zvirinani isu tese tine izvo zvakafanana!
Nezve Nhema Ink ROI
Nhema Ink ROI ndeye SaaS-yakavakirwa, yepamusoro vatengi-analytics chikuva chekutengesa, kushambadzira uye vatungamiriri veP & L yekuvandudza kutenga kwevatengi, kuchengetedza uye kuwedzera mikana yekukura.
Tags: kupiswaAnalyticsinki nhema nhemamhando yechiratidzobusiness intelligencekudyidzana kwevatengimutengi-centricitymarketing automationkushambadzira tekinorojiMicrosoftomni-chiteshipangataurasalesforce